Fikarohana sy fananganana firaketana sy firaketana an-tsoratra sy fanamboarana ny rafitra | Heweiyongtai
Fikarohana sy rafitra firaketana an-tsoratra momba ny vatana sy fitaratra
Ity vokatra ity dia manana sensor sensor fampitana sary avo lenta. Miaraka amin'ny valin'ny valin'ny spectral 150nm ~ 1100nm, ny rafitra dia afaka manao fikarohana marobe sy firaketana an-tsoratra avo lenta ny dian-tanan-tànana, dian-drofia, pentina rà, urina, spermatozoa, soritry ny ADN, sela miparitaka ary zavamiaina hafa amin'ny zavatra maro.
Ity vokatra ity dia manana sensor sensor fampitana sary avo lenta. Miaraka amin'ny valin'ny valiny mirefy 150nm ~ 1100nm, ny rafitra dia afaka manao fikarohana be dia be sy firaketana an-tsoratra avo lenta ny dian-tànana, ny dian-drofia, ny loto amin'ny rà, ny urine, ny spermatozoa, ny dian-tànan'ny ADN, ny sela miely sy ny zavamiaina hafa amin'ny zavatra maro. fahatsapana avo sy fahaiza-mamantatra ny herinandro faramparany. Miaraka amin'ny reagent novolavolaina manokana, ny rafitra dia mamakivaky ny elanelam-bidin-tsaina nentim-paharazana ny fameperana ny zavatra, azo jerena sy hakana sary ihany koa ireo zavatra azo zahana sy ny faritra misitery.
Ny chip SCMOS UV manazava ny lamosina, ny mason-tsivana feno spektrum feno matihanina ary loharanom-pahazavana tarika marobe an'ny rafitra dia afaka manohana ny famaritana avo lenta ao anatin'ny faritra UV lalina, hazavana hita maso ary eo akaikin'ny faritra misy infrared. Afaka mahatsapa ny asan'ny halavirana lavitra izy io. fitadiavana ny dian-tànan'ny rantsan-tànana, fitifirana ny rantsantanany akaiky (mihidy), ny fikarohana lalan-dra mety ho lavitra, ny fikarohana ny biolojika, ny fizahana ny antontan-taratasy sns.
Ny famolavolana mifangaro dia mahatonga ny fitaovana ho voafintina kokoa sy azo entina rehefa mahafeno ny tanjon'ny fiasa maro. Noho izany, dia mandrafitra ny fatiantoka misy eo amin'ny sehatry ny spectrum ultra malalaka eo amin'ny tsena, toy ny habe, lanjany mavesatra ary fiasa sarotra izay tsy afaka mifanaraka. amin'ny tontolo sarotra any an-tsaha.
Faritra feno feno: isan-karazany valiny: 150nm ~ 1100nm.
Fandraisana an-tsary horonantsary HD an-tsary / sary an-tsary nomerika mazava; fr 25 frame / S 1080P HD sary fitaterana sary; 4 tapitrisa pixel fivoahana sary mazava tsara.
Fampisehoana efijery porofon'ny fipoahana HD: fisehoana efijery 5-inch super IPS HD.
Solosaina kendrena feno feno mifanaraka tanteraka: mifanentana amin'ny karazan-tsary rehetra misy sary mitsipitsipika feno, izay tsy vitan'ny fikarohana lehibe, fa mifanaraka amin'ny sary makro koa.
Ny fahatsapana UV avo-avo: ny fahatsapana avo lenta dia azo ahena amin'ny alàlan'ny UV feno, mihoatra ny 60% amin'ny 254nm.
Fihenan'ny tabataba elektronika haavo siansa: teknolojia fampihenana feo elektronika (iedoubling) teknolojia fampihenana ny tabataba.
Loharano hazavana feno: loharanom-pahazavana LED UV mahomby. Andiam-loharanom-pahazavana hazavana feno spectrum feno.
Horonam-peo HD tsy voafehy sy sary tsy dia mazava. Voatahiry ao amin'ny Micro SD / SDHC; haingam-pandeha ambony endrika PNG, sary avo lenta avo lenta: 12G / s
Halaviran-tany mifanaraka amin'izany
Ny halaviran-tsoratry ny spektrum mahomby: 150nm ~ 1100nm; Ny valin'ny fahatsapana ny fahatsapana dia 70% amin'ny faritra ultraviolet, indrindra ny 60% amin'ny 254nm ary 55% amin'ny 365nm.
Teknolojia elektronika mahery vaika kokoa
Ny fampiasana sary CMOS misy siansa misy sehatra kendrena goavambe sy piksela lehibe izay misy hazavana kely dia ambany. Mandritra izany fotoana izany, ny tabataba any aoriana dia nosarahan'ny teknolojia fihenan'ny tabataba FPGA sy DSP ara-tsiansa, ary azo ilay sary mifanohitra mazava. Tsy mila mangatsiaka ary tsy mila fanatsarana fantsona fampitomboana hahazoana sary porofo mivaingana feno-spektrum feno.
Ny sensor sensor CMOS avo lenta avo lenta UV dia noraisina, miaraka amin'ny vahaolana tokana 2048 * 2048. Ny haben'ny kendrena sary dia diagonal 1 santimetatra, ary ny refy pixel dia 5.5 microns.
Ny milina lehibe an'ny rafitry ny firaketana dia misy bokotra fanodinana mandeha ho azy ny sary, izay afaka manitsy ny sary azy ho azy.
Fantson-tsolika elektronika, fotoana fampiroboroboana ho azy na fanovana tanana.
Fivoahan'ny horonantsary sy sary
1080P 25 frame / output sary horonantsary faharoa, 2048 * 2048 fakantsary tokana misy sary miisa 4 megapixel.
Izy io dia mifanaraka tanteraka amin'ny mason-tsivana kendrena optika manokana ho an'ny fikarohana an-tsaha, fandinihana ary fanamafisana ny fitifirana endri-tsipiriany
Halavan'ny fifantohana / halavan'ny onja
35mm / F2.0 lens quartz mifanaraka tanteraka, amin'ny alàlan'ny halavan'ny 150nm-2000nm, 5 metatra ny halavan'ny fikarohana porofo, ny fahitana, ny fametrahana ny fakan-tsary.
Fanitsiana Achromatic, UV / hita maso / infrared, mangarahara sy maranitra ny sary.
Ny halaviran'ny sary avy amin'ny 15cm ka hatramin'ny infinity, ny fikarohana amin'ny faritra midadasika mankany amin'ny efijery feno ny dian-tànana, ary koa ny fanamafisana ny antsipirian'ny maso momba ny fisie, manitsy fotsiny ny fifantohana dia mety ho ny sary manontolo.
Loharanon-jiro UV, tanjona optika ary famolavolana sivana miloko mifangaro, maivana ary maivana. Ny loharano hazavana feno hafanam-po feno dia azo namboarina arak'izay takian'ny mpampiasa.
Rafitra sivana loko manokana ho an'ny firaketana heloka bevava, hazavana LED UV ary endrika fandraisam-peo sy fampirantiana
Band UV fantsom-pandoko
Sivana UV manokana: UVA (254nm), UVC (365nm)
Kitapo fanivanana loko azo jerena
Tarika infrared sivana miloko
Format fandraisam-peo sy fitehirizana
RAW / AVI endrika tsy voafintina, karatra SDHC haingam-pandeha ho an'ny firaketana sy tahirin'ny sary sy sary.
Fomba fitehirizana sary: ​​Sary firaketana HD
Endrika AVI / ARW; Rehefa maka takelaka tokana; BMP, JPEG, TIF ary endrika hafa.
Fanodinana fanatsarana sary amin'ny fotoana tena izy
Manomeza fihenam-bidy fanelanelanana amin'ny fotoana tena izy rehefa mandray porofo ara-pitaovana.
5 inch IPS HD, ≥ pixel 720 * 1280. Amin'ny alàlan'ny HDMI hahatratra ny fanitarana ny fisehoana efijery lehibe misy famaritana avo lenta.
Fanavaozana ny rafitra an-tserasera
Ny fanavaozana ny rafitra an-tserasera na an-tserasera dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo tambajotra na karatra SD izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny rafitra
Rafitra famatsiana herinaratra
Batterie lithium azo soloina azo soloina azo soloina.
Manaraka: Iray amin'ireo mafana indrindra ho an'ny mpitsangatsangana vy amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana an-tsambo any China
Rafitra Scanner X-ray azo entina HWXRY-04
Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Masinina scanner X-Ray azo entina, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Scanner X-Ray Portable, Fitaratra fitiliana fiara, Fakan-tsary fakan-tsary,